Banaan bax looga soo horjeedo waddooyinka xiran oo ka socda Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Banaan bax looga soo horjeedo waddooyinka xiran oo ka socda Muqdisho
Waxaa goordhaw qeybo kamid ah laamiga Maka Al Mukarama gaar ahaan Isgooska KM-4 ka bilowday banaan bax ay dhigayaan Darawalada Mooto Bajaajta iyo dadweyne kale, kuwaa oo kasoo horjeeda xirnaashaha Wadooyinka Muqdisho.
Darawalada Mooto bajaajta ayaa la sheegay in Mootooyinkooda ku dhax dansadeen laamiga dhaxdiisa, waxaana inta badan xirmay isku socodka gaagiidka qeybo kamid ah Laamiga Maka Al Mukarama.
Bajaajleyda iyo dadka kale ee dhigaya banana baxa ayaa ka cabanaya xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho, waxa ayna sheegeen in dhibaato xoogan ku qabaan wadooyinka dhagxaanta lagu jaray iyo Isgoosyada ay ciidamada xirteen.
Waxa ay sheegeen dadka banaan baxa dhigaya in Amarkii Madaxweyne Farmaajo uusan wali dhaqan galin ayna xiran yihiin qaar kamid ah Wadooyinka Muqdisho, waxa ayna ugu baaqdeen Madaxda dowlada in wadooyinka loo furo silacana laga daayo.
Dibad baxayaasha ayaa ku hanjabay in aysan laamiga ka tagi doonin ilaa laga xaliyo cabashadooda, waxaana wararka aan heleyno sheegayaan in ay sii kordhayaan dadka banaan baxa kazoo qeyb galaya.
Ciidamada amaanka ayaa ku guul dareestay in ay kala eryaan dadka dhigaya banana baxa, waxa ayna ciidamada marar badan kor u redeem rasaas si ay ugu kala eryaan dadka banaan baxa laamiga ka dhigaya.